फार्मसी खोप सेवाहरूको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, समाचार समाचार मनोरञ्जन समुदाय, कम्पनी कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य घरपालुवा जनावर कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल कम्पनी, औषधि जानकारी खेलहरु कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> तपाईं फार्मसीमा खोप लगाउने बारेमा के थाहा हुनुपर्छ
तपाईं फार्मसीमा खोप लगाउने बारेमा के थाहा हुनुपर्छ
रोगको उपचार स्वास्थ्यसेवाको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तर संक्रमण रोक्नु अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ - र हाम्रो समाजको लागि लाभदायक छ। को कोभिड -19 महामारी विश्वव्यापी स्वास्थ्यका लागि कस्ता महत्वपूर्ण खोपहरू छन् भनेर देखाइएको छ।
तपाईंले खोपहरूका बारे धेरै सोचविचार गर्नु पर्दैन किनकि तिनीहरू प्रायः तपाईंको वार्षिक तालिका हुन्। बच्चाहरू उनीहरूका बाल चिकित्सकहरूसँग खोपको तालिकामा छन्, र वयस्कहरू उनीहरूको सुविधाको लागि उनीहरूको वार्षिक डाक्टर भ्रमणमा वा तिनीहरूको स्थानीय फार्मेसीमा फ्लू शट लिन सक्छन्।
फार्मासिष्टहरूले १ the 1990 ० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा खोप दिन थाले र आज, सबै states० राज्यहरु र पोर्टो रिकोमा फार्मासिष्टहरूले खोप दिन सक्छन्।फार्मासिस्टको रूपमा, म फार्मेसी खोपको बारेमा सुन्ने सबै सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ दिइरहेको छु।
डाक्टरकहाँ जान कति खर्च लाग्छ?
खोपहरू किन महत्त्वपूर्ण छन्?
खोप सूक्ष्मजीवहरूको तयारी हो, या त प्रत्यक्ष वा निष्क्रिय, जसले विशेष रोगको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदछ वा बढाउँछ। खोप सयौं वर्ष पुरानो हो - पहिलो बिफर खोप १ 17०० को उत्तरार्धमा विकसित भयो। उनीहरूले प्रायः उन्मूलन भएका बिरामीहरू जो एक पटक डाइथेरिया जस्ता धेरै जीवनहरू खर्च गरे।
सिफारिश खोपहरू लिने बच्चाहरूसँग चिकनपक्स, दादुरा, रुबेला, वा पेर्ट्युसिस जस्ता रोगहरू हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ।
जब अधिकांश जनस im्ख्या खोपिएको हुन्छ, यसले खोपहरू लिन सक्षम नहुनेहरूको लागि हड्डी प्रतिरोधात्मक क्षमता सिर्जना गर्दछ। अर्को शब्दहरुमा, यो रोगको जनसंख्यामा परिणत हुने सम्भावना धेरै कम हुन्छ जब खोप दर उच्च हुन्छ।
मलाई कुन खोप चाहिन्छ?
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू (CDC) दुई सिफारिश खोप तालिका, एक को लागी राख्छ बच्चाहरु , र एक को लागी वयस्कहरू । यसले सिफारिस गर्छ कि कुन खोपहरू दिनु पर्दछ र कहिले, बुस्टरहरूको बारेमा जानकारीको साथ (वा पुनः खोप)।
खोपहरू धेरै प्रारम्भिक उमेरमा सुरु हुन्छ। प्रायः शिशुहरू पहिलो जन्म हेपाटाइटिस बी शट जन्म पछि चाँडै प्राप्त गर्दछ, सम्भवतः अस्पताल छोड्नु भन्दा पहिले। त्यसो भए, बच्चाहरूले १ 16 वर्षको उमेरसम्म खोपहरू प्राप्त गर्न जारी राख्दछ। धेरै जसो स्कूलहरू र संगठित गतिविधिहरूलाई सहभागिताका लागि अप-टु-डेट खोप आवश्यक पर्दछ। कलेज र विश्वविद्यालय सहित ।
वयस्कको रूपमा, थप खोपहरू तपाईंको जन्म वर्षमा निर्भर गर्दै सिफारिस गरिन्छ। केही वयस्कहरूलाई अघिल्लो खोपहरूको बूस्टरहरू, वा क्याच-अप भ्याक्सिन तालिका चाहिन्छ यदि उनीहरूले खोप प्राप्त गरेनन् भने यसलाई सिफारिस गरिएको थियो। त्यहाँ अरूहरू हुन सक्छन् जुन तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सिफारिश गर्दछ तपाईंको विशिष्ट स्वास्थ्य ईतिहासको आधारमा।
म खोपहरू कहाँ पाउन सक्छु?
१ 1990 1990 ० दशक भन्दा पहिले, खोपहरू चिकित्सकको कार्यालयमा लगभग विशेष रूपमा दिइन्थ्यो, डाक्टर वा प्रशिक्षित नर्सले। १ 1996 1996 In मा, अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन (एपीएए) ले फार्मेसी-आधारित खोप डेलिभरी कार्यक्रम गठन गर्‍यो जसले खोपहरू जनतामा बढी पहुँचयोग्य बनाउँदछ। आज, तपाईं लगभग कुनै पनि फार्मेसीमा हिंड्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका खोपहरू लिन सक्नुहुन्छ।
खोप प्रमाण पत्र के हो?
फार्मेसी-आधारित खोप डिलिभरी कार्यक्रम रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्र (सीडीसी) द्वारा समर्थित थियो। यो एक प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जुन फार्मासिष्टहरूलाई खोपहरू प्रशासन गर्न र सिफारिस गर्न आवश्यक सीपहरू दिन्छ।
मैले फार्मसीमा मेरो खोप किन लिने?
इमान्दार, किनभने यो सजिलो छ! फार्मेसीले सामान्यतया वाक-इन आधारमा खोपहरू प्रस्ताव गर्दछ, ताकि जब तपाइँ उपयुक्त हुनुहुनेछ। त्यहाँ एक दिन काम छुट्टी लिन वा डाक्टरको कार्यालयमा अतिरिक्त भेटघाट गर्न आवश्यक छैन।
फार्मासिष्टहरू खोपहरू र औषधीहरूको उच्च प्रशिक्षण हुन्छन्। के तपाई स्टेरोइड्स वा अन्य इम्युनोसप्रेसन्ट ड्रग्स लिनुहुन्छ? तपाईको फार्मासिष्टले थाहा पाउनेछ कि कुन खोपहरू व्यवस्थापन गर्न सुरक्षित छ, वा खोप लगाउन अघि तपाईलाई केहि औषधिहरुबाट टाढा राख्नु पर्छ। फार्मासिष्टहरू पनि जान्दछन् कुन खोपहरू एकै समयमा दिइन्छ र अर्को खोलाको लागि फिर्ता आउन अनुस्मारकहरू सेटअप गर्न सक्दछ यदि तपाईंको खोप एक श्रृंखला भन्दा बढी प्रशासनको आवश्यक छ।
तपाईको खोप इतिहासलाई पहुँचयोग्य राख्नु र यसलाई तपाईसँगै ल्याउने काममा महत्वपूर्ण हुन्छ जब तपाईं खोपहरू लिनुहुन्छ। फार्मासिष्टहरूले तपाईंको लागि यो अपडेट गर्न सक्दछन् र तपाईंको चिकित्सकलाई कुनै भ्याक्सिनहरू रिपोर्ट गर्न सक्छन् ताकि तपाईंको रेकर्डहरू अपडेट हुनेछन्।
मैले कहिले गर्नु पर्छ हैन फार्मेसीमा खोप लिने?
कहिलेकाँही कहिलेकाँही डाक्टरको अफिसमा तपाईको भ्याक्सिन लिन उत्तम हुन्छ। एक उदाहरण यदि एलर्जी प्रतिक्रियाको सम्भावना छ भने हुनेछ। धेरै मौसमी फ्लू खोपहरूले लेटेक्स वा अण्डा जस्ता कम्पोनेन्टहरूमा एलर्जी हुने बिरामीहरूको लागि चेतावनी दिन्छ। यदि तपाईंसँग यी एलर्जीहरूको इतिहास छ भने, यो खोप डाक्टरको अफिसमा प्राप्त गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईको चिकित्सकले प्रतिक्रियाका लागि अवसर कम गर्न तपाईलाई पूर्व-औषधी छान्न सक्छ।
यस्तो अवस्था पनि हुन सक्छ जहाँ तपाईंको डाक्टरले खोप सिफारिस गर्छन्, तर तपाईं फार्मेसीको लागि प्रोटोकल मापदण्ड पूरा गर्नुहुन्न। उदाहरण को लागी, अन्तर्निहित फेफोको रोग संग एक इम्युनोकोम्पराइज्ड बिरामीलाई अधिकतर प्रोटोकलले फार्मेसीले गर्न सक्ने भन्दा कम उमेरमा निमोनिया खोप लिन आवश्यक पर्दछ। वा, कान्छो बच्चा फार्मेसी उमेर समूहमा समावेश हुन सक्दैन। प्रत्येक फार्मेसीको लागि बिभिन्न नीतिहरू हुन्छन् जुन कुन खोपहरू दिन सक्छन् र कुन उमेरले उनीहरूले सेवा दिन सक्छन।
के मेरो बीमाले फार्मेसी खोपको लागि भुक्तान गर्नेछ?
धेरै प्रिस्क्रिप्शन बीमा योजना एक फार्मेसीमा प्रशासित खोपहरु कभर। थप रूपमा, फार्मेसीहरूले अक्सर निश्चित मेडिकल बीमा योजनाहरूमा भ्याक्सिनहरू बिल गर्न सक्दछ (यो योजना तपाईले डाक्टरको कार्यालय वा अस्पतालमा जानुपर्दा सामान्यतया प्रयोग गर्नुहुन्छ)। समग्रमा, बीमा योजनाहरु द्वारा खोप कभरेज धेरै राम्रो छ। खोपहरूलाई रोकथामको रूपमा लिइन्छ, र खोप लिनाले तपाईंलाई बिमारी, हराएको ज्याला, र रोगसँग बिरामी हुनबाट बचाउन सक्छ। कभरेज फरक फरक हुन सक्छ, त्यसैले फार्मेसीमा जानु अघि आफ्नो योजना जाँच गर्नु उत्तम हो।
धेरै जसो खोप मेडिकेयर पार्ट डी योजना अन्तर्गत कभर गरिएको छ, हर्पेस जोस्टर भ्याक्सिन लगायत, जसलाई अझ राम्रो गरी चिनिन्छ दाद शट । त्यहाँ केही खोपहरू छन् जुन सँधै मेडिकेयर भाग बी द्वारा ढाकिएको छ: इन्फ्लूएन्जा (फ्लू) , न्यूमोकोकल, र हेपेटाइटिस बी। त्यहाँ केही उदाहरणहरू छन् जब अन्य खोपहरू भाग बी अन्तर्गत कभर हुन सक्छ यदि तपाईं प्रत्यक्ष रूपमा कुनै रोगको जोखिममा पर्नुभयो भने। उदाहरण को लागी, एक पंचर घाउ पछि टिटानस खोप भाग बी अन्तर्गत कभर गरिनेछ। जबकि अधिकांश फार्मेसीहरू मेडिकेयर पार्ट डी योजनाहरूसँग सम्झौता गरिएको हुन्छ, सबै मेडिकेयर पार्ट बीसँग सम्झौता गरिएका हुँदैनन् फार्मेसी स्टाफलाई सोध्नुहोस्।
सम्बन्धित: म कसरी नि: शुल्क वा छुट प्राप्त फ्लू शट प्राप्त गर्न सक्छु?
धेरै जसो फार्मेसीहरूले बीमा बिलि check जाँच गर्दछ र तपाईंलाई खोप दिनु अघि तपाईंको जेब आउट-अफ-पॉकेट उत्तरदायित्वका बारे जानकारी दिन्छ। यदि मूल्य आश्चर्यजनक छ, तपाईं सधैं प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। यसले मेल महीना पछि एक आश्चर्यचकित बिललाई वेवास्ता गर्दछ। फार्मेसी भ्याक्सिन मूल्य निर्धारण र प्रतिलिपिहरू धेरै पारदर्शी हुन्छन् - निश्चित गर्नुहोस् खोपहरूमा तपाईंको उत्तम मूल्यको लागि एकलकेयर जाँच गर्नुहोस् पनि।
फार्मासिष्टहरू र उनीहरूको टोलीसँग खोपहरूको बारेमा धेरै ज्ञान हुन्छ। तिनीहरू सजिलै पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरहरू हुन्। कुनै अपोइन्टमेन्ट आवाश्यक छैन, र तिनीहरूको व्यावसायिक बुद्धि र सल्लाह सामान्यतया कुनै अतिरिक्त शुल्कमा उपलब्ध छन्। खोप लिन तयार हुनुहुन्छ? जिज्ञासु यदि तपाईंलाई निश्चित खोप चाहिएको छ भने? आज रोक्नुहोस् र तपाईंको फार्मासिस्टलाई हेर्नुहोस्।
कसरी स्वाभाविक रूप मा उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न को लागी
मधुमेह को कारण एड को लागी प्राकृतिक उपचार
छिटो रक्तचाप कम गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो
योजना बी कति लामो समय को लागी राम्रो छ
a1c को लागी राम्रो नम्बर के हो